Ịkwado na Nkwenye na Mmekọahụ - Play Play
Ube, ụtarị, obi ụtọ
Ike nke enweghị ike
N'oge ụfọdụ mgbe a na-ahapụ ihe nile, ọ dịghịkwa ihe ijuanya ọzọ, ọ nwere ike isi ike ịnweta ma nwee ahụmahụ na-ezighị ezi. Mgbubiga ihe ókè nke mgbe nile emeela ka ọtụtụ ndị nwee obi ụtọ na agụụ mmekọahụ. Ọ naghị enwe ume nke ihe a machibidoro iwu, bụ ebe mkparịta ụka ahụ na-ebikọ ọnụ n'oge gara aga.
Ịhụnanya, ọchịchọ na - egwuregwu
Mana mmadu n'ebube ya bu isi ihe ohuru na ohuru ohuru. Ya mere, o jikwa ike mee ka ndụ ọhụrụ dị ndụ.
Ị ga-achọ ihe, ma ị ka na-ahụ ihe ndị na-agbanyeghị ma ọ bụ na-erughị ala ma ọ bụ ya mere agbanye agbamakwụkwọ nke ihe omimi ahụ machibido iwu.
Ọkara ndụ nke mmekọrịta na-adị mkpụmkpụ ma dị nkenke, nke nwere ike ọ gaghị adịkarịrị ala n'ihi ụkọ a kpọtụrụla banyere mmekọahụ.
Ya mere di na di na nwunye abughi nani ihe ndi mmadu choro n 'ubochi, nke ndi mmadu nile nwere ike ibi ndu nke oma, kamakwa iji megharia onwe ha mgbe nile ma kpughe onwe ha n'uzo di iche iche.
Ọtụtụ mgbe ihe ọhụrụ, ya mere na-ekwu okwu.
Onye ọ bụla nwere n'echiche, mana ọ bụghị naanị iche n'echiche, kama ọ bụ echiche efu, echiche efu na-eme ka ọ dịkwuo nkọwa. Ihe na-eme ma ọ bụ ihe na-eme ka onye ahụ nwee obi ụtọ, ọ bụrụ na ọ na-eche banyere ya. Ọtụtụ mgbe, ọchịchọ ndị a na-agụ agụụ na-anọgide na-emezughị n'ihi na ha anaghị ekwupụta n'ihu ọha ma ghọta nke ọma na onye òtù ọlụlụ. Ma nke ahụ ekwesịghị ịbụ, n'ihi na ọbụna onye ahụ na-emekọ ihe na-enwe agụụ mmekọahụ nzuzo, nke ọ ga-achọ ibi ndụ.
Ọ bụ ohere maka otu di na nwunye ebe a iji nyere ibe ha aka na-adakwasị ọkwa ọzọ nke eroticism - ọ dịghịkwa ihe karịrị mkparịta ụka dị mkpirikpi.
Dika ozo, otutu ochicho nzuzo ezighi ezi ... ma onye choro ka odi nma? Ọ dịghị! N'ezie, ụfọdụ ihe efu dị iche iche karịa ndị ọzọ, ma ha niile bụ ndị bara uru ma dị oke ọnụ na-agbalị.
Obi ike maka ọhụrụ ebe a bụ isiokwu
Ọtụtụ ndị di na nwunye na-enwekarị ihe ijuanya na ha nwere ike ịchọta na omume mmekọahụ ọhụrụ na mmetụta dị ike na ndụ mmekọahụ na-enye afọ ojuju pụrụ inwe na ndụ kwa ụbọchị.
Echiche dị iche iche nke mmekọahụ nke ọtụtụ ndị na-agụnye ịgba ohu n'ụdị dị iche iche. Nke ahụ abụghịkwa mmepe ọhụrụ. E gosipụtala na ịgba ohu na ihe ndị dị otú ahụ site na akụkọ ihe mere eme nile nke ihe a kpọrọ mmadụ bụ ihe ngosi mmekọahụ.
Na Pragmatic Middle Ages nakwa dịka Rom oge ochie ma ọ bụ ọbụna n'oge ndị omenala nke Mesopotemia, ọ bụghị ihe ijuanya na ịchọrọ onye mmekọ ma ọ bụ ka ya onwe ya kegide ya.
Ụzọ e si eke mmadụ dị oke ụba nakwa ebe nwere ike iweta nnukwu obi ụtọ.
Dị ka onye ọhụrụ na-aga ụwa nke egwuregwu ịgba chaa chaa, ọ ga-abụrịrị na ọ dị mfe na mbụ. Nke a apụtaghị na ọ gaghị abụ ọhịa! Naanị otu onye nwere ike ma eleghị anya ọ bụghị ngwa ngwa na ụzụ zuru ezu n'ihu ịnwa ịbanye n'okwu ahụ, ma jiri nwayọ na-eru nso. N'ihi na mgbe ụfọdụ, ịnụ ọkụ n'obi nwere ike ịkwụsị nyocha ahụ n'oge mbụ - na ị gaghị ahapụ ihe nwere ike ịba mma n'eziokwu site n'ịdị na-aka njọ. Ịgbachi nkịtị bụ ike.
Ụzọ kachasị mma isi malite n'ụlọ ma nọrọ ebe kachasị mma. N'ihi na ụlọnga ụlọ na - enyekarị nhọrọ kacha mma. Ihe ndina, isi na ụkwụ dị ka ọ bara uru dịka ụkwụ nke ihe ndina ma ọ bụ etiti.
Ọzọkwa, nhọrọ nke onye na-ajụ ase, nke onye ahụ na-ezube ịkegide onye iro ya kwesịrị ịme atụmatụ ya. Ọ kacha mma ịbanye n'ime ihe dị mfe. Ụfụka dị mma ma ọ bụ eriri dị arọ - akpụkpọ anụ na flax ga-enwe oge mgbe emesịrị (na-achọkwa ka ọ bụrụ obere oge).
Enweghị ntụpọ kpụ ọkụ n'ọnụ na mmalite. Ọ bụrụgodị na onye òtù ọlụlụ kwesịrị ịrịọ maka ya. Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na ndị ọhụrụ na - enweghịzi oghere ọzọ ... mgbe ejiri ha mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ha nwere ike ịdọrọ eriri ahụ n'onwe ha n'oge ahụ. Ọ bụ ya mere na ọ dịghị ihe ọjọọ na ya.
Ọ bụ ya mere o ji dị mma na mbido: A na-ahapụ ihe nile, mana egbula ihe ọ bụla!
Ụfọdụ ndị dị ka echiche nke igosipụta ike n'elu ndị ọzọ, ma ọ bụ n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ n'uche. N'aka nke ọzọ, ndị ọzọ na-ahọrọ echiche nke onye ọzọ - ọzọ na anụ ahụ nakwa dịka uche.
E nwere ọtụtụ ihe kpatara nke a. Ọtụtụ mgbe, ndị na-edo onwe ha n'okpuru nwoke na nwanyị na-edo onwe ha n'okpuru ndụ na-adị kwa ụbọchị, na-enwekarị ọnọdụ dị elu na ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha guzosiri ike. Ị na-achọ mgbe niile ihe ị na-enweghị - nakwa na ọnọdụ mmekọahụ.
Egwuregwu na ịchị
"Ngalaba nke ọrụ" nke ndị isi na ndị na-efe ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe. Ọtụtụ mgbe a na-eji egwuregwu agbụrụ ndị a kpọtụrụ aha na-egosipụta ọrụ nke onye ọ bụla. Mana n'ezie o nwere ike ịga n'ihu karịa "nanị" egwuregwu ndị agbụ.
Ụfọdụ ndị na-efe ofufe na-enwe obi ụtọ pụrụ iche n'inwe ihe mgbu anụ ahụ. Iji mepụta ihe mgbu a, ị nwere ike iji ngwá ọrụ dịgasị iche iche - ya bụrụ ụtarị, ụtarị ma ọ bụ ọbụna klọb ma ọ bụ batons. Ụfọdụ dị ka ya siri ike karịa ndị ọzọ.
Ma nsogbu mgbu nke uche abụghị ihe a na-ahụkarị n'ime ime ụlọ nke ndị di na nwunye nwere ọchịchọ nke egwuregwu ike. Site na okwu ma ọ bụ ụdị nke dị iche iche nke ụbụrụ dị iche iche nwere ike ịkpata mmerụ ụbụrụ dị mma ... N'ezie, ha anaghị adịgide adịgide, ọ bụkwa nanị maka ịmalite inwe obi ụtọ n'oge ahụ.
Ị ghaghị ịnọ na nche ka ị ghara imebi ya. Tupu ime ihe ọbụla, ị ga - eme ka onye ọ bụla nwee "okwu nchekwa". Ọ bụrụ na a na-akpọ okwu a dị nchedo, a ghaghị ịkwụsị omume niile n'egbughị oge ma na-ajụghị. N'ihi nke a, dị ka onye na-edo onwe ya n'okpuru, ị kwenyesiri ike na ị gaghị akpa ike.
Ụfọdụ ndị na-ahụ maka ihe nkiri ahụ na-ekwu na onye kwesịrị "ịkwụsị mgbe ọ na-agbapụta ọbara", ya na ndị ọzọ, mgbe ahụ, ọ bụ nanị ntụrụndụ zuru oke malitere. Ọ bụ otu isiokwu nke onye ọ bụla ga-anwale onwe ya. Enweghị ọgwụ ederede ụwa niile maka ihe mgbu ọ bụla a ga-enweta ma ọ bụ mee maka ọsịsọ nke iji mmekọahụ eme ihe. Ma ọ na-anọgide: Ihe niile na-edozi.